अभिनेत्रीहरुको लकडाउन : फिल्म, खाना र परिवार- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
चैत्र २३, २०७६ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — सँधै फिल्ममा व्यस्त हुने अभिनेत्रीहरुले लकडाउनको समयलाई मुश्किलले पाइने छुट्टीका रुपमा लिइरहेका छन् ।
घरको काम र ध्यानमा व्यस्त रेखा
जाडो छल्नलाई तिहारमा आमा मोरङ गाउँ गएदेखि म घरमा एक्लै छु । एक्लै भएपनि दिक्क लागेको छैन । म पहिलेदेखि नै अनुशासनमा बस्ने मान्छे हुँ । बिनाकाम लखरलखर हिँड्ने मेरो बानी छैन ।
बिहानै उठेर व्यायाम गर्छु, योगा गर्छु । लकडाउनदेखि नै घरको सहयोगी दिदीलाई घरमै सुरक्षित भएर बस्‍नुस् भनेर छुट्टी दिएकी छु । यसैले घरका काम सबै म आफैं गर्छु । घरको काम मेरालागि एकखाले हिलिङजस्तै भएको छ । र, मैले उहाँको जीवन र दुख्ख बुझ्ने मौका पनि पाएँ । आफूले खाएको, लाएको कुरा आफैंले सफा गर्नु एकप्रकारको ध्यान नै रैछ । ध्यान पनि गरिररहेकी छु । आसनमा बसेर आँखा चिम्लनुमात्र ध्यान होइन । जे काम गर्छौं, त्यसमा दत्तचित्त हुनु पनि एक किसिमको ध्यान नै हो ।
म स्थानीय तह, वडा अध्यक्ष र मेयरसँग सहकार्य पनि गर्दैछु । हाम्रो वडामा कसरी मानिसलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनायौं । घर बसेरै काम भइरहेको छ । यतिखेर म सरकारकै मुख ताक्नेहरु देख्छु । सरकारको मात्र आलोचना गरेको देख्छु । जुन गलत हो । यो बेलामा भ्रष्टाचार नै गयो रे, यो कोरोनाको त्रास सकिएपछि हिसाब गर्दा भो त । अहिले मानव जीवन नै धरापमा छ । हाम्रोमाथि मृत्यु मडारिइरहेको छ । यो बेला मजाक र छेडखाड गर्ने बेला होइन। तर किन मानिसहरुले बुझिरहेका छैनन् ।
हाम्रो वडामा हरेक तीसवटा घर लक गरेर एकजना लिडर छानिदिएका छौं । त्यहाँको रेखदेख भइरहेको छ । यसरी को–को बाहिरबाट आए, थाहा हुन्छ । वुहानमा पनि यही गरेको होइन त ? यहाँ हावातालमा आलोचना भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ । सबलाई कुर्सी चाहिएको छ । मलाई यो कुरा ठीक लागिरहेको छैन ।
यो कोरोना कहिले जान्छ थाहा छैन । रोग, त्रासबाट मुक्त भए पनि भोकमरिले मर्ने सम्भावना छ । डायनोसरको जस्तो हाम्रो अस्तित्व होला भन्ने पीर छ । म यी सब हेरिरहेको छु ।
मानिसमा सन्तुलित भोजन अभ्यास छैन । सन्तुलित भोजन खानुपर्‍यो । यो बेला तनाव, चिन्ता बढ्नसक्छ । मन बिचलित हुनसक्छ । यो लकडाउनको समयलाई सहज रुपले लिनुपर्छ । सिंगो पृथ्वी लकडाउनमा छ, हामी मात्र होइन । यसरी बसेर हामीले मानवजाति र प्रकृतिको सुरक्षा गरिरहेका छौं भन्ने अनुभव गर्‍यौं भने तनाव कम हुन्छ ।
अरु बेला त पैसा र शक्तिका लागि दौडधुप गर्दा कसले आफ्ना लागि समय छुट्यायो त ? कसैले छुट्याएन । जन्मियो, पढाई, जागिर, त्यसपछि बुढेसकाल त्यसपछि त सकियो जीवन । यो यति सुन्दर समय छ हामीसँग । यो समयमा आफूले आफूलाई भेट्ने कोशिस गर्नुपर्छ । जो व्यक्तिले आफूलाई भेट्छ, उसले संसार जित्छ ।
यो भयभीत अवस्थामा मानवजातिको रक्षा गर्न सक्यौं भने हामी एकदम राम्रो युगमा प्रवेश गर्छौं । यो त मानवले मानवता के हो भन्ने कुरा बुझ्ने अवसर होजस्तो लाग्छ । मै खाउँ मैं लाउँ भन्ने अमानवता अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ भन्ने आशमा छु । होला, यो बेला हाम्रो अर्थतन्त्र ध्वस्त होला । हामी बाँचे मिलेर देशलाई उठाउन लागीपरौंला नि !
युट्युबबाट परिकार बनाउन सिक्दै वर्षा
घरमै बसिरहेको छु । खाली समयको उपयोग गरेर फिल्म हेर्ने, खाना पकाउने । लकडाउनमा खासै विशेष त केही भएको छैन । फिल्महरुमा व्यस्त हुँदा परिवारसँग समय बिताउन पाइरहिएको हुँदैन । अहिले त्यो समय पाइएको छ । लकडाउनपछि मेरो दुइटा फिल्मको सुटिङ सुरु हुँदैछ । झन व्यस्त हुने समय छ । त्यसैले पनि यो खाली समयको मलाई महत्व छ ।
युट्युबबाट नयाँ-नयाँ परिकार बनाउन सिक्दैछु । यसरी नै यो लकडाउनको समयको सदुपयोग गर्दैछु । आफूलाई के-के पकाउन आउँदैन त्यो सब सिक्दैछु । मनपर्ने फिल्महरु हेर्दैछु । वर्षैंसम्म कुरा नगरेको पूराना साथीहरुसँग पनि भिडियो कल गरेर कुरा गर्दैछु । लकडाउनको सुरुवातमा त बोरिङ लागेको थियो । अहिले त यही जीवनसँग बानी परेको छ । अब लकडाउन खुल्यो भने चाहिँ कसरी बाहिर निस्कने भन्ने समस्या होलाजस्तो छ । सामान्य जीवनमा आउन केही समय त पक्कै लाग्ला ।
यसरी घरमा बसिरहँदा सुटिङ सेटको रमाइलो मिस हुँदो रहेछ । घरमा त जिम्मेवारी हुन्छ नि ! अहिले सुटिङ सेटभन्दा पनि हाम्रो स्पटब्वाई, किचनको दाइ, मेकअपको सहयोगी साथीहरुको जीवनमा अपठ्यारो पर्‍यो होला भन्ने सोच आइरहेको छ । किनकि उहाँहरु त दैनिक काम गरेर आफ्नो जीवन चलाउनुहुन्छ। काम नहुँदा गाह्रो भयो होला ।
यो दुई हप्तामा दुईतीन पटक जति योगा गरें हुँला । लकडाउन यसरी नै बितिरहेको छ ।
फिल्म हेरेर समय बिताउँदै रिमा
हुन त हाम्रो कामको प्रकृति नै फरक छ । हामी बाहिर काम गर्छौं । त्यसैले यति लामो समय घरमा बस्ने अवसर खासै मिल्दैन। यसपालि लकडाउनले अरु साथीहरुले लकडाउनमा बोर लागेको भन्नुहुन्छ । खासमा मलाईचाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ । मनमा एक किसिमको डर त छ । त्यो सबैमा छ ।
हुन त हामी सँधै सुटिङको लागि बाहिर-बाहिर हिँडिरहेका हुन्छौं । चाडवर्पमा पनि भ्याइनभ्याई हुन्छ । परिवार र साथीभाइलाई दिने समय पनि खासै पाइदैन । लकडाउनले परिवारलाई दिने समय मिलाइदिएजस्तै भएको छ ।
अहिले सबैको मनमा कसरी सुरक्षित बस्ने भन्ने चिन्ता छ । मैलेचाहिँ हरेक कुरालाई सकारात्मक भएर हेर्छु । यसैले अहिले लामो बिदा पाएको ठानेकी छु । फिल्म त म अरुबेला पनि हेरिरहेकी हुन्छु । अहिले समय पनि अलि बढी भएकले अलि धेरै फिल्महरु हेर्दैछु । त्योबाहेक मैले 'चाणक्य' भन्ने पुस्तक पनि पढी सीध्याएँ । म भान्सामा त्यति छिर्ने मान्छे त होइन । योपटक भान्सामा गएर कुकिङ पनि गर्दैछु ।
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ १८:०१
‘विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले ताइवानलाई बेवास्ता गर्दा बाँकी विश्‍वले मूल्य चुकाउनुपर्‍यो’
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमण अहिले विश्वका लगभग सबै देशमा फैलिइसकेको छ । चीन, युरोप हुँदै यसले अहिले अमेरिकालाई आक्रान्त बनाएको छ । तर पनि केही देश भने पहिले नै सजगता अपनाएका कारण तुलनात्मक रुपमा कम प्रभावित छन् ।
गत जनवरी २५ मा चीनबाट तीव्र रुपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावित खतराबारे विश्वका धेरै मुुलुक अनभिज्ञ थिए । तर दुई मुलुक ताइवान र अस्ट्रेलियामा भने चार–चार जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
अस्ट्रेलिया र ताइवानको जनंसख्या करिब–करिब बराबर(२ करोड ४० लाख) रहेको छ । दुवै टापु मुलुक पनि हुन् । र चीनसँग व्यापार र यातायातको सञ्जाल जोडिएका देश पनि । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको १० हप्तापछि भने दुई देशको अवस्था अलि भिन्‍न छ । यतिबेला अस्ट्रेलियामा ५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने ताइवानमा ४ सयभन्दा कम संक्रमित छन् । आइतबार दिउँसाेसम्म ताइवानमा ३५५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यसमध्ये ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५० जना निको भएका छन् ।
यसो भन्दैमा अस्ट्रेलियाले सावधानी नअपनाएको भन्न नमिल्ने सीएनएनका पत्रकार जेम्स ग्रिफिथ्स बताउँछन् । उनी लेख्छन्, ‘अस्ट्रेलियाले नराम्रो गऱ्यो भन्ने होइन, २० देशमा अस्ट्रेलियामा भन्दा बढी संक्रमण फैलिएको छ । तीमध्ये सात वटा देशमा त अस्ट्रेलियामा भन्दा ७ गुणा बढी संक्रमित रहेका छन् ।’ पत्रकार जेम्सले विश्वका अरु देशले नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण ताइवानले कसरी रोक्न सफल भइरहेको छ भनेर रिपोर्ट तयार पारेका छन् ।
विगतको तीतो अनुभव
पत्रकार जेम्स ताइवानले विगतमा भोगेका तीता अनुभवका कारण पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि कडा कदम चालेको बताउँछन् । सन् २००३ मा सार्स(सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रम) को महामारीका बेला हङकङ, दक्षिणी चीनसँगै ताइवान पनि नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । त्यतिबेला ताइवानमा १८१ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै एक लाख ५० हजारभन्दा बढीलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । सार्स संक्रमण र अहिलेको अवस्था भने अलि फरक छ । एसियाका धेरै देशले भविष्यमा महामारी आएका के कस्ता पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने पाठ सिकेका छन् ।
ताइवानमा विश्वकै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा रहेको छ । चिनियाँ नयाँ वर्षको संघारमा वुहानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनेबित्तिकै ताइवानको नेसनल हेल्थ कमान्ड सेन्टर(एनएचसीसी) सम्भावित खतराका लागि आवश्यक कदम चालिसकेको अमेरिकन मेडिकल एसोसियसनको जर्नलमा रिपोर्ट छापिएको छ । उक्त रिपोर्टमा ताइवानले द्रुत गतिमा पछिल्लो ५ हप्तामा १२४ वटा ‘आवश्यक कदम’ चालेको बताइएको छ । जर्नलमा ताइवानकी चिकित्सक जेसोन वाङ ताइवानले बोर्डर बन्द गरेर मात्रै नहुने देखेपछि अन्य कदम पनि चालेको बताउँछिन् ।
अरु देश कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कदम चाल्ने कि नचाल्ने भन्ने विवादमा अल्झिरहँदा ताइवान भने निकै अगाडि बढिसकेको थियो । जनवरीमा जोन होप्किन्स विश्वविद्यालयले गरेको एउटा अध्ययनमा चीनपछि ताइवान कोरोना भाइरस संक्रमणको ‘रेड जोन’ मा राखेको थियो । जोन होप्किन्स विश्वविद्यायलले चीनसँगको निकटता, सम्बन्धर यातायात सञ्जालका कारण ताइवानमा कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिन सक्ने अनुमान गरेको थियो । तर ताइवानले सुरुमै चीनका अधिकांश भूभागबाट आउने यात्रुमाथि प्रतिबन्ध लगाइहाल्यो । त्यस्तै कुनै पनि पानीजहाजलाई आफ्नो बन्दरगाहमा रोक्न नदिने निर्णय पनि गऱ्यो । साथै होम क्वारेन्टाइनको नियम पालना नगरे कडा सजाय दिने पनि घोषणा गऱ्यो ।
त्यस्तै ताइवानले मुलुकमा मास्कको अभाव हुन नदिन मास्कको उत्पादन पनि बढाउने काम गऱ्यो । त्यस्तै मुलुकभर परीक्षण गर्ने, पुन: परीक्षण गर्ने, पहिले निमोनियाजस्तै रोग लागेका र जानकारी नदिने व्यक्तिलाई कडा सजाय दिनेजस्ता कदम पनि अगाडि बढायो ।
साथै कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि ताइवानले द्रुत गतिमा चालेको पारदर्शी कदम र दैनिक रुपमा स्वास्थ्य अधिकारीलेहरु पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनेजस्ता क्रियाकलापले महामारीका बेलामा पनि प्रजातान्त्रिक तवरले सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको पत्रकार जेम्स लेख्छन् ।
पछिल्लो अवस्थामा ताइवानसँग घरेलु आवश्यकताका लागि पर्याप्त मात्रामा मास्क रहेको छ । बुधबार ताइवान सरकारले एक करोड मास्क विभिन्न देशलाई सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेको छ । अमेरिका, इटाली, स्पेन, अरु ९ वटा युरोपेली मुलुक र ताइवानसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएका अरु देशलाई ताइवानले ती मास्क सहयोग गर्ने भएको हो ।
कतिपय विश्लेषकले विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लूएचओ) ले ताइवानलाई बेवास्ता गर्दा बाँकी विश्वले मूल्य चुकाउनु परेको पनि बताउँछन् ।अमेरिकी पत्रिका द नेसनको अनलाइन संस्करणमा विल्फ्रेड चान लेख्छन्, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लाति विश्वका कुनै पनि मुलुकभन्दा पहिले ताइवान तयार थियो । तर डब्लूएचओले पहिले राजनीतिलाई प्राथमिकता दियो ।’
जनवरी र फेब्रुअरीमा ताइवानले चालेका कदमबारे धेरै पश्चिमा मुलुकहरु अनभिज्ञ पनि थिए । ताइवानमा के भइरहेको छ भन्नेबारे अन्य मुलुकलाई डब्लूएचओले जानकारी गराउने कुरै भएन । किनकी ताइवान डब्लूएचओको सदस्य राष्ट्र होइन ।
चीनले ताइवान आफ्नो भूभाग भएको बताउँदै आएको छ । जबसम्म ताइवानले ‘एक चीन नीति’ स्वीकार नगरेसम्म अन्तर्राष्टिय संगठनहरुमा आबद्ध हुन नदिने अडान चीनले दोहोऱ्याउँदै आइरहेको छ । चीनकै दबाबमा ताइपेइले ‘चाइनिज ताइपेई’ का रुपमा ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएको छ । सन् २०१६ सम्म त ताइवान डब्लूएचओको पर्यवक्षक सदस्यका रुपमा रहेको थियो । साई इङ वेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै ताइवान डब्लूएचओको पर्यवक्षक राष्ट्रका रुपबाट समेत बाहिरियो । डब्लूएचओले भने ताइवान सदस्य राष्ट्र नभएकैले स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानमा कुनै समस्या नभएको बताउँदै आएको छ । तर धेरै पर्यवेक्षकहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठनले ताइवानसँग समन्वय नगर्दा सार्स र कोरोना महामारीका बेला नकारात्मक असर देखिएको बताएका छन् ।
अहिले पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका बारेमा डब्लूएचओको तथ्याङ्क र सहयोग नपाएको चीन र ताइवान मामिलाकी जानकार अस्ट्रेलियाको लोवी इन्स्टिच्युटकी नताशा कसाम बताउँछिन् । सूचनामा पहुँच नहुँदा ताइवानले पहिले नै निर्णय गर्न बाध्य भएको पनि नताशा बताउँछिन् ।
त्यस्तै ताइवानले आफ्ना चिकित्सक र मेडिकल सामग्री बाँकी विश्वमा पठाउन चाहेको बताउँदै आएको छ । तर डब्लूएचओ बाहिर रहेकाले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि मुलुकभन्दा बाहिर प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । ‘हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, कुनै देशलाई आवश्यक भएमा हामीले हाम्रा दक्ष चिकित्सक, अनुसन्धानकर्ता र नर्सहरु पठाउन चाहन्छौं,’ जोन होप्किन्स विश्वविद्यायलयबाट संक्रामक रोगमा विशेषज्ञता हासिल गरेका ताइवानका उपराष्ट्रपति डाक्टर चेन चियनजेनले गत हप्ता भनेका थिए । उनले आफूहरुले योगदान गर्न चाहेर पनि नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
त्यस्तै गत हप्ता मात्रै हङकङको एउटा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा डब्लूएचओका सहायक महानिर्देशक ब्रुस एलवार्डलाई ताइवानसम्बन्धी प्रश्न सोध्दा इन्टरनेटको समस्या भउको भन्दै उत्तर दिन हिच्किचाएका थिए । कोरोना रोकथामका लागि ताइवानले चालेको कदमबा बारेमा के भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले सबै कुरा ‘चीनबाट थाहा पाइरहेको’ बताएका थिए । तर उनले ताइवानको नामै लिएर टिप्पणी गर्न भने मानेनन् । त्यसको केही समयपछि ताइवानको विदेश मन्त्रालयले त्यो अन्तर्वार्ताको क्लिपसहित ट्वीट गऱ्यो, ‘ओहो !, डब्लूएचओमा ‘ताइवान’ उच्चारण गर्न पनि पाइँदैन । महामारीसँग लड्नका लागि राजनीतिलाई अलग राख्नैपर्छ ।’
अहिलेको अवस्थामा राजनीति गर्नुभन्दा पनि विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि ताइवानसँग भएको दक्ष जनशक्ति र स्रोतसाधनको सहयोग लिन पर्ने देखिन्छ ।
-सीएनएन र अन्य एजेन्सीको सहयोगमा
प्रकाशित : चैत्र २३, २०७६ १७:५९